Fa maninona no tokony handoa vola ny orinasanao amin'ny DNS tantanana? | Martech Zone
Fa maninona no tokony handoa vola ny orinasanao amin'ny DNS tantanana?
Zoma 20 Novambra 2020 Zoma 20 Novambra 2020 Douglas Karr
Na dia mitantana ny fisoratana anarana amin'ny sehatra amin'ny registrar domain ianao, tsy hevitra tsara foana ny mitantana ny toerana sy ny fomba hamahana ny fidiranao DNS hafa hafa hamahana ny mailaka, ny subdomain, ny host, sns. dia fivarotana domains, tsy manome antoka fa afaka mamaha haingana ny faritra misy anao, mitantana mora ary misy fihenam-bidy.
Inona ny fitantanana DNS?
Ny DNS Management dia sehatra mifehy ny clusters mpizara Domain Name System. Ny data DNS dia matetika aparitaka amin'ny lozisialy maro.
Ahoana ny fomba fiasan'ny DNS?
Andao hanome ohatra ny fametrahana ny tranoko manokana.
Mpampiasa iray mangataka martech.zone ao amin'ny browser. Izany fangatahana izany dia mankany amin'ny mpizara DNS izay manome ny lalana izay itazonana izany fangatahana http… amin'ny mpizara anarana izany. Avy eo dia anontaniana ny mpizara anarana ary omena ny mpampiantrano tranokala mampiasa rakitsoratra A na CNAME. Avy eo ny fangatahana dia nomena ny mpampiantrano ny tranokalako ary misy lalana omena hiverina izay voavaha amin'ny tranokala.
Mpampiasa mailaka martech.zone ao amin'ny browser. Izany fangatahana izany dia mankany amin'ny mpizara DNS izay manome ny lalana itazonana izany fangatahana mailaka izany… ao amin'ny mpizara anarana. Avy eo anontaniana ny mpizara anarana ary omena amin'ny alàlan'ny rakitra MX ny mpamatsy fampiantranoana mailaka ahy. Avy eo dia alefa any amin'ny orinasako fampiantranoana mailaka ny mailaka ary alefa tsara amin'ny boaty fampidirana ahy.
Misy lafiny fitsikerana vitsivitsy amin'ny DNS Management izay afaka manamboatra na manapotika fikambanana iray izay ananan'ireto sehatra ireto manampy anao hamaha:
Speed - Ny haingana ny foto-drafitrasan'ny DNS anao, ny haingana kokoa ny fangatahana dia azo alefa sy hivaha. Ny fampiasana sehatra fitantanana DNS premium dia afaka manampy amin'ny fihetsiky ny mpampiasa sy ny fahitana ny motera fikarohana.
Management - Mety ho tsikaritrao fa rehefa manavao ny DNS amin'ny registrar domain ianao dia hahazo valiny mahazatra fa mety haharitra ora maro ny fanovana. Ny fanovana sehatra DNS Management dia amin'ny fotoana tena izy. Vokatr'izany dia azonao atao ny mampihena ny loza mety hitranga amin'ny orinasanao amin'ny alàlan'ny fiandrasana ny famahana ny fikirakirana DNS nohavaozina.
Fiverimberenana - Ahoana raha tsy mahomby ny DNS an'ny registrar domain? Na dia tsy fahita aza izany dia nitranga tamin'ny fanafihana DNS manerantany izany. Ny ankamaroan'ny sehatra fitantanana DNS dia manana fahaiza-manao failover DNS miverimberina izay afaka mitazona ny asan-dahalo ataonao raha misy fahatapahana.
ClouDNS: Hosting DNS haingana, maimaimpoana ary azo antoka
CloudDNS dia mpitarika ao amin'ity orinasa ity, manome DNS Hosting haingana sy azo antoka. Manolotra serivisy DNS iray taonina izy ireo izay manomboka amin'ny kaonty fampiantranoana DNS maimaim-poana hatrany amin'ny alàlan'ny lohamilina DNS tsy miankina ho an'ny orinasanao:
DNS Dynamic - Dynamic DNS dia serivisy DNS, izay manome ny safidy hanovana ny adiresy IP an'ny firaketana DNS iray na maromaro rehefa mandeha ho azy ny adiresy IP an'ny fitaovana ampiasainao.
DNS faharoa - Ny Secondary DNS dia manome fomba hizarana ny fivezivezena DNS ho an'ny anaran'ny domain amin'ny mpamatsy DNS roa na maromaro ho an'ny fotoana mety sy fihenam-bidy mety indrindra amin'ny fomba tena mora sy sariaka. Tsy afaka mitantana afa-tsy amin'ny mpamatsy tokana (DNS DNS) voalohany ny rakitra DNS momba ny anaran'ny sehatra ary ny mpamatsy faharoa mampiasa ny teknolojia DNS Secondary dia azo tazonina ho daty ary hafangaro ho azy.
Mivadika DNS - Serivisy Reverse DNS nomen'ny ClouDNS dia serivisy Premium DNS ho an'ny tompona tamba-jotra IP sy mpandraharaha ary tsy tafiditra ao amin'ny drafitra Maimaimpoana. Ny fampiantranoana Reverse DNS dia serivisy kilasy fandraharahana ary manohana ny faritra IPv4 sy IPv6 Reverse DNS.
DNSSEC - DNSSEC dia singa iray an'ny Domain Name System (DNS) izay manamarina ny valiny amin'ny fijerena ny anaran'ny domain. Manakana ny mpanafika tsy hanodinkodina na hanapoizina ny valin'ny fangatahana DNS. Ny teknolojia DNS dia tsy natao hiarovana ao an-tsaina. Ohatra iray amin'ny fanafihana ny fotodrafitrasa DNS ny fanararaotana DNS. Amin'izay fotoana izay dia misy mpanafika mangalatra cache an'ny DNS resolver, izay mahatonga ny mpisera mitsidika tranokala hahazo adiresy IP diso ary hijery ny toerana mampidi-doza an'io mpanafika io fa tsy ilay nokasainy.
DNS Failover - Serivisy DNS Failover maimaimpoana avy amin'ny ClouDNS izay mitazona ny tranokalanao sy ny serivisinao amin'ny Internet raha sendra misy fahatapahan'ny rafitra na ny tambajotra. Miaraka amin'ny DNS Failover dia azonao atao ihany koa ny mifindra fifamoivoizana eo amin'ny tamba-jotra redundant.
DNS voafidy - Managed DNS dia serivisy tantanin'ny orinasa mpampiantrano DNS matihanina. A Managed DNS Provider dia mamela ny mpampiasa hitantana ny fivezivezivezy DNS amin'ny alàlan'ny fampiasana tontonana mifehy ny tranonkala.
Anycast DNS - Anycast DNS dia foto-kevitra tsotra - afaka tonga amin'ny toerana tokana ianao manaraka ny lalana maro samihafa. Raha tokony hidina amin'ny lalana iray ny fifamoivoizana rehetra, ny Anycast DNS dia mampiasa toerana maro izay mahazo fangatahana amin'ny tambajotra, fa amin'ny toerana samy hafa. Ny tanjona eto dia ny hahitan'ny tamba-jotra ny lalana fohy indrindra ho an'ny mpampiasa amin'ny mpizara DNS iray manokana.
DNS orinasa - ClouDNS 'Enterprise DNS network dia natao hanodinana fanontaniana an-tapitrisany isan-tsegondra. Ny maodelin'ny vidin'izy ireo dia tsy mifototra amin'ny faktiora fangatahana. Tsy homena vola ianao noho ny tampon'ny tamponao ary tsy hijanona tsy hiasa mihitsy ny anaranao, noho ny fetran'ny fangatahana DNS. Tsy homena faktiora amin'ny karazana tondra-drano fangatahana DNS ianao.
SSL Certificates - Ny Certificat SSL dia miaro ny angon-drakitra ataon'ny mpanjifanao ao anatin'izany ny teny miafina, ny carte de crédit ary ny mombamomba anao. Ny fahazoana mari-pankasitrahana SSL no fomba mora indrindra hanatsarana ny fahatokisan'ny mpanjifanao ny orinasa an-tserasera.
Server DNS manokana - Mpizara DNS manokana dia mpizara DNS misy marika fotsy fotsy. Rehefa mahazo mpizara DNS Private ianao dia hampifandraisina amin'ny tamba-jotra sy ny tambajotran'izy ireo izany. Ny Server dia hitantana sy hotohanan'ny mpitantana ny rafitr'izy ireo ary ho azonao atao ny mitantana ny fonenanao rehetra amin'ny alàlan'ny interface web ClouDNS.
CloudDNS dia mpamatsy DNS Managed hatramin'ny 2010. Ny tanjon'izy ireo dia ny hanome ny serivisy DNS tsara indrindra eto an-tany. Manatsara sy manitatra ny tamba-jotra hatrany izy ireo mba hihoatra ny fenitry ny indostria ary hitondra ny mpanjifa ROI avo indrindra. Ny fotodrafitrasan'izy ireo any Anycast DNS dia misy ivon-toerana 29 isan-karazany any amin'ny firenena 19 any amin'ny kaontinanta 6.
Tsy dia matetika loatra ianao no sady afaka manangona vola no mampitombo ny fihenam-bidy, ny hafainganana ary ny fahatokisana ireo fanananao an-tserasera - saingy izany indrindra no nataonay. Ataovy fotsiny ny fikarohana Fahatapahan'ny DNS ary jereo hoe firy ireo orinasa manana olana amin'ny fahamendrehany DNS.
Misorata anarana amin'ny kaonty ClouDNS maimaim-poana
Fanamarihana: ny rohy omena ato amin'ity lahatsoratra ity dia rohy mpiara-miasa aminay.
Tags: a recordrahonafiraketana cnameDNSfitantanana anaranampizara anaran-tsehatraHafainganana mpizara anaranafamahana domainhafainganam-pandehavoatantana dnsmx firaketanampizara anaranahafainganam-pandehan'ny tranonkalahafainganam-pandeha
StitcherAds: Fitantanana doka ara-tsosialy, fanandramana, fanamafisana, ary personalization